Orinasa zaza - Mpanamboatra ankizy any Sina, mpamatsy
GPS Tracker / Ankizy / GT-C01
Ity modely finday finday ity indrindra ho an'ny ankizy kely, fametrahana toerana ary fifandraisana an-tariby. Afaka mametraka tsara ny toerana misy ny elanelana 20m ao anaty sy ny halavirana 200m any ivelany ny olona, ​​ary afaka mametraka faritra azo antoka amin'ny alàlan'ny fametrahana fefy elektrika hahazoana antoka fa eo amin'ny faritra azo antoka foana ilay zaza. Afaka manara-maso ny tantaram-pitiliana mandritra ny 1 volana.
Kilemaina an-dakilasy. Manakana ny fiantsoan'ny olon-tsy fantatra, ny fampitan-kafatra hafatra, ny antso an-tsary ary ny antso an-telefaona voafetra ho an'ny mpikambana mifandray amin'ny APP sy ny lisitra voarakitra isa, ny fanelingelenana ary ny loza.
Volavola mahafinaritra tsara tarehy ho an'ny ankizy, famantaranandro tsara ho an'ny ankizy.
GPS Tracker / Ankizy / GT-C02
Ity tracker modely 4G modely ity dia ho an'ny ankizy kely, ny lokon'ny ankizy, ny endriny ary ny asany. Miaraka amin'ny haitao fanarahan-dàlana marobe dia afaka mahita ny toerana misy ny ankizy 20m anaty trano sy 200 m any ivelany ianao. Raha vantany vao tafavoaka ny fefy elektrika napetraka ny zaza dia hiambina ny fiambenana, arovy tanteraka ny fiarovana ny ankizy.
Ho an'ny fifandraisana, ny hafatra am-peo, ny antso an-tsary ary ny antso an-tariby dia voafetra ho an'ireo mpikambana mifandraika amin'ny APP sy lisitra 10 voarakitra, manelingelina sy mampidi-doza.
Izy io dia miasa ho an'ny faritra manerantany.
GPS Tracker / Ankizy / GT-C03
Tracker marani-tsaina modely natao ho an'ny zaza miloko marevaka. Izy io dia miasa araka ny fametrahana ny toerana misy azy, ary ny fifandraisana an-tarobia an-tariby.
Miorina amin'ny GPS teknolojia marobe toerana + WIFI + LBS + AGPS, ny mitafy famantaranandro dia azo jerena ao anatin'ny 20m amin'ny varavarana sy faritra 200m ivelan'ny trano. Izy io dia azo apetraka fefy elektrika maromaro, raha vao mivoaka ny fefy ilay mitondra azy dia hampandrenesiny fa afaka mifandray amin'ny fotoana mety ianao mba hahazoana fiarovana.
Feo HD, antso an-tsary ary hafatra am-peo, ny fomba fifandraisana rehetra ary ny fandidiana tsotra. Ny fifandraisana rehetra voafetra amin'ny lisitry ny boky an-tariby 100 dia alaviro ny fifandraisan'ny olon-tsy fantatra.
Izy io dia haavo IP67 tsy misy rano, tsy misy atahorana milalao rano ny mpitafy zaza, mety ho akanjo koa aza rehefa milomano. Pedometer, mety amin'ny famolavolana fanazaran-tena mety mifototra amin'ny filan'ny fahasalamana ary mahatakatra ny toetoetran'ny fanatanjahan-tena androany.
Ny mpandahatra loko mahafatifaty ankizy GPS dia koa famantaranandro marani-tsaina, manampy anao hahafantatra hatrany ny zanakao izany, hiaro ny fiarovana azy ireo. Ny teknolojia toerana dia mifototra amin'ny GPS + AGPS + LBS + WIFI, teknolojia marobe hanamboarana ny toerana amin'ny fahamendrehana 5m, ary tsy misy fiampangana fototra. Azonao atao ny mametraka fefy elektrika ho an'ny faritra sasany, raha vao mivoaka ny faritra azo antoka ny fitaovana dia hampahatsiahy anao izy amin'ny voalohany. Ary raha miala ny tracker dia hampatsiahy anao koa izy. Azonao atao ihany koa ny manara-maso ny tontolon'ny mpitazona fitaovana tsy misy antsoantso. Raha vao manana olana ny mpitafy fitaovana dia afaka manery ny SOS lakile iray ho fanampiana anao izy ireo. Ireo fiasa mahafinaritra rehetra dia ataovy izay hahazoana antoka fa eo ambany fikarakaranao ireo ankizy, ary hampahafantarina anao amin'ny 1st fotoana raha misy tsy mety.
Izy io koa dia famantaranandro marani-tsaina, afaka miantso video, miantso feo, mandefa hafatra amin'ny alàlan'ny serasera roa sosona. Ary ny fifandraisana rehetra dia ao anatin'ny lisitry ny nomeraon-telefaona voarakitra. Manakana ny fiantsoana sy ny fifandraisana amin'ny olon-tsy fantatra izy io ary manakana ny loza mety hitranga.
Fanaraha-maso ara-pahasalamana ihany koa izy io, ho an'ny maripanan'ny vatana, ny tosidra ary ny tahan'ny fo. Manana ny angon-drakitra antsipirihany avy amin'ny APP ianao.
Ny tracker multi-functional tracker feno dia miahy ny zanakao, miaro ny fiarovana azy ireo sy ny fahasalamany, mandray soa amin'ny fitomboany.
Ny modely GPS tracker natao manokana ho an'ny ankizy 3-12 taona, akanjo ho an'ny faritra manerantany, ny asa lehibe dia ny fifandraisana, ny fifehezana ny fahasalamana ary ny toerana. Manana loko manga, mavokely ary mainty ho an'ny safidy izy.
Ny asany dia miorina amin'ny GPS teknolojia + LBS + WIFI miaraka amin'ny marina 5m ary tsy misy sarany fototra. Manampy ireo fefy elektrika dia ho fantatrao fa ao anaty faritra azo antoka foana ireo ankizy, raha vantany vao tonga amin'ilay faritra izy ireo dia hampandrenesin'ny APP fa ho fantatrao ny toe-javatra ary handray andraikitra ianao. Ny tracker dia miaraka amin'ny batterie lehibe afaka manohana 5 andro am-piomanana ary hampatsiahy raha kely ny bateria.
Izy io dia manana fiasan-dahatsary video sy feo saingy voafetra ihany amin'ny laharana lisitra voarakitra izay manakana ny olon-tsy fantatra sy ny loza mety hitranga. Tsy misy rano amin'ny IP67 izy io, tsy misy atahorana ny fanelingelenana avy amin'ny orana na ny filalaovana rano.
Mitombo Ligh, Mamboly hazavana, Jiro zavamaniry, Mitombo Lightin, Mitombo ny avotra, Mamboly Lightin ny zavamaniry,